प्रतिफल राम्रो दिन्छ, ढुक्कसँग लगानी गरे हुन्छ «
प्रतिफल राम्रो दिन्छ, ढुक्कसँग लगानी गरे हुन्छ
डा. आत्मराम घिमिरे लिवर्टी इनर्जी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । कम्पनीले लमजुङमा निर्माण गरिरहेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना चार महिनाभित्र उत्पादन गर्ने गरी अघि बढेको छ । कम्पनीले आगामी ३ भदौदेखि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी समेत गर्न लागेको छ । कम्पनीले यसअघि नै आयोजना प्रभावित र स्थानीय जिल्लाबासीका लागि शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका अवस्था र सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको सेयरबारे कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक घिमिरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
कम्पनीले सेयर जारी गर्न लागेको छ, कसलाई कसरी जारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
जारी पुँजीमध्ये स्थनीयबासी तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको २५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५० लाख रकममध्ये ३७ करोड ५० लाख बराबरको ३७ लाख ५० हजार कित्तामध्ये स्थानीयबासीका लागि १० प्रतिशत अर्थात १५ करोड बराबरका १५ लाख कित्ता तथा सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत अर्थात २२ करोड ५० लाख बराबरका २२ लाख ५० हजार कित्ता सार्वजनिाक गर्न लागेका छौ । कर्मचारीहरूका लागि २ प्रतिशत र सामुहिक लगानी कोषहरूलाई ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने गरी अघि बढेको छ ।
माथिल्लो दोर्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको अवस्था अहिले के छ ?
अबको चार महिनापछि उत्पादन गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको छ । अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । भुकम्प र नाकाबन्दी तथा अहिलेको कोभिदको कारणले केही ढिलो भयो तर अहिले तीव्रताका साथ काम भईरहेको छ । प्रसारण लाइनको केही काम नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणसँग मिलेर गर्नुपर्नेछ । त्यो भइरहेको छ । आफ्नो उत्पादन हुने बेलासम्म प्रसारण लाइन पनि निर्माण भईसक्ने लक्ष्य छ । चार महिनाभित्र त बिजुली बेचेर आम्दानी पनि सुरु भैसक्छ । आयोजनाबाट बार्षिक ऊर्जा १३८.२१ गिगावाट आवर उत्पादन हुन्छ । प्रति मेगावाट १८ करोड जति लागत छ अर्थात ४ अर्ब ६३ करोड ६० लाख जति छ । यसको प्ये ब्याक पेरियड ८.२ बर्ष छ । आकर्षक आयोजना भएकोले यसको प्रतिफल पनि आकर्षक छ ।
इनर्जी कम्पनीले अहिले सेयर जारी गरेको छ । के कम्पनीले अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि निर्माण गरिरहेको छ ?
अन्य आयोजनाहरू पनि कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको २४.६ मेगावाटको बढीगाड खोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन अन्तिम चरणमा छ । १.६ मेगावाटको लोड खोला जलविद्युत्को सम्भाव्यता, वातावरण र कनेक्सन सम्झौता भैसकेको छ ।
के आधारमा आयोजना आकर्षक छ र यसले प्रतिफल दिन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?
दोर्दी आयोजनाको हाइड्रोलोजी अति राम्रो छ । दोर्दी खोलाको पानीको बहाब र हाम्रो अध्ययन तथा डिजाइनअनुसार २६ मेगावाट विद्युत्् निकाल्न सकिन्छ । तर हामीले २५ मेगावाट छ । यसो हुँदा भविष्यमा उत्पादन घट्ने अवस्था आउँदैन । प्रतिफलको हिसाबले कुरा गर्दा यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । अहिले जलविद्युत्को सेयरको कुरा गर्दा सानिमा गु्रपको कुरा आउँछ । यसको सेयर मुल्य अहिले २३० रुपैयाँ छ । सानिमाको प्रति मेगावाट आम्दानी २.७६ करोड छ । अरु समेत गरी तीन करोड जति छ । हाम्रो प्रति मेगावाट ३ करोडभन्दा बढी छ । सेयर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने प्रक्षेपणको आधारमा हामी धेरै अगाडी छौ । जति पछि भयो, त्यति नै फाइदा पनि बढी दिँदै जान सक्ने अवस्था छ । केही बर्ष प्रतिक्षा गरेमा जलविद्युत्मा लामो समयसम्म प्रतिफल पाउने अवस्था हुन्छ ।
दोर्दी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेपनि कम्पनीले तेस्रो बर्षमै १२.५ प्रतिशत लाभांश दिने सक्ने अवस्था छ । बार्षिक ऊर्जा उत्पादन राम्रो भएकोले लगानीकर्ताहरू निर्माणमा केही ढिलाई भएपनि निराशा हुनुपर्ने अवस्थ छैन । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अन्य २ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् तथा आम्दानी पनि जोडिने हुँदा यसपछि पनि थप लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । हामीले अध्ययनकै करणमा बढी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छ । हामीले बाहिर ल्याएका सूचकहरू अर्थात् घोषणा गरेको प्रतिफलमा पर्याप्त अध्ययन गरिएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट वित्तीय विश्लेषण गराएर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी जस्ता नियामक निकायबाट स्वीकृत गराएर घोषणा गरिएको हो । यसैले, यसमा त्यति शंका गरिरहनु पर्दैन । फेरि, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपद् आयो भने अलग कुरा नत्र हामीले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि मर्मत सम्भारमा त्यही धेरै खर्च हुने अवस्था छैन । हामीले विद्युत्गृहमा जडान हुने रनर, टर्बाइन, जेनेरेटर लगायत उपकरण युरोपियन प्रविधिकै राखेका छौं । यसो हुँदा पटक–पटक मर्मत गरिरहनुपर्ने पर्दैन र मर्मत सम्भारमा धेरै खर्च गर्नु नपर्ने अवस्था छ ।
अहिले त जलविद्युत् आयोजनाहरूको सेयर अवस्था दयनीयनै छ । तपाईहरू दोर्दी आयोजनाहरूमा सेयर हाल्न चाहाने लगानीकर्तालाई के भन्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो त हाइड्रोलोजी राम्रो छ । यसको आधारमा आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ । आयोजनाले कति वर्षमा ऋण तिरिसक्छ, आम्दानी कस्तो प्रक्षेपण गरेको छ र प्रतिफल दिने आधार के हो ? यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को पक्ष भनेको गुणस्तरीय उपकरण पनि हो । यी सबै कुरामा आयोजना आकर्षक छ । राम्रो अध्ययन भएर आयोजना अघि प्रतिफल राम्रो दिने भएकोले ढुक्कसँग कम्पनीमा सेयर लगानी गरे हुन्छ । सबै हिसाबले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छ ।
डा. आत्मराम थापा
#लिवर्टी इनर्जी कम्पनी